China Down Jackets WT001 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Eigday
Lining lamba volon'ondry, polyester
DESIGN MAORA SY TAILORED: Ny lamba ivelany Softshell miaraka amin'ny lamba volon'ondry anatiny miaraka amina fehikibo azo esorina dia manome antoka anao hankafy hafanana milamina amin'ny filana rehetra; Volavola fanoherana tsy misy rano sy rivotra ho an'ny hetsika tsy misy fetra mankany amin'ireo hetsika ivelany.
CONTROL TEMPERATURE LEHIBE LEHIBE: Manome anao fifehezana hafanana mahaleo tena ho an'ny faritra mafana sy mialoha ny lamosina araka izay irinao ny Mpamonjy; Ny fifehezana mari-pana amin'ny ambaratonga telo (avo, salantsalany, ambany) dia ahafahanao miova malalaka amin'ny toe-javatra samihafa.
FIAROVANA MAHATONDRANA: pads fanafanana 3 napetraka tratra havia, tratra havanana ary ny lamosina; Ny rafitra fanaraha-maso fitaovana fanatsarana vao haingana dia marina kokoa sy mahomby kokoa.
Fampiasana maharitra: Ny banky herinaratra 5200mAh dia manome hafanana hatramin'ny 10 ora eo ho eo (ny vanim-potoana maharitra dia mety miovaova arakaraka ny karazana banky herinaratra); Tafiditra ao amin'ny vokatray ny banky herinaratra.
Fikarakarana mora: milina azo esorina ambanin'ny tsingerin'ny fanasana milina 50+; AZA hadino ny manala ny banky herinaratra alohan'ny fanasana.
Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fotoana maro: any ivelany, manao ski ambony, ririnina, manjono, bisikileta, mitoby, mihaza, birao, sns. Manavao, marani-tsaina, kanto ary mafana, mety indrindra amin'ny fanomezana sy fahatsiarovana.
Hafanaina haingana ao anatin'ny segondra miaraka amin'ny bateria voamarina 7.4V UL / CE; Mandritra ny ora fiasana 10, escort anao any ivelany amin'ny ririnina mangatsiaka.
Ny haavon'ny fanafanana dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra herinaratra.
Hafanana manerana ny faritra misy ny vatana (tratra havia sy havanana, afovoany aoriana).
Ny famolavolana manify dia manome anao endrika bika kokoa ary mitazona ny hafanana manakaiky ny vatanao ihany koa.
Tsy misy ratsy noho ny zipper voahosotra, noho izany dia matoky izahay YKK fa hitazona anao ho zipina mafy.
Izahay dia mizaha ny palitao amin'ny alàlan'ny tsingerina fanasana maherin'ny 50 misesy mba hahazoana antoka fa ny singa fanafanana sy ny palitao dia tsy simban'ny milina fanasan-damba.
Antsipirian'ny fonosana: 1 pcs * Palitao efa nohafanaina, 1pcs * Kitapo fanasan-damba, kitapo 1 pcs * 1, charger, 1pcs * manual, 1 desiccant *, 1 bateria * batterie.
Teo aloha: Ririnina Rechargeable Electric 7.4V 2200mah bateria nafanaina akanjo mafana mafana
Manaraka: Palitao WT002